Meross wuxuu soo bandhigayaa laambadiisa HomeKit ee ku habboon | Waxaan ka socdaa mac
Qalab badan oo intaa ka badan ayaa lagu heli karaa tiknoolajiyada HomeKit kiiskanna saxiixa Meross, wuxuu soo bandhigayaa laambad dabaq ah oo caqli badan oo la jaan qaadi karta tikniyoolajiyadda otomaatiga guriga Apple. Xaaladdan oo kale, waa nal nashqadeysan oo casri ah oo la shidi karo ama la demin karo ama lagu hagaajin karo awood ahaan qalab kasta oo la jaan qaadi kara HomeKit, ha noqdo Mac, iPhone, iPad, iwm.
Iftiinka Meross waxaa si macquul ah loogu sameeyay nalalka LED-ka iyo sidoo kale waa la jaan qaadayaa nidaamka Alexa iyo Google Assistant. Meel fog ka xakamaynta laambada shirkadan meelkasta oo ay joogto waa suurtogal marwalba isku xidhka shabakada.
Laydhkan dabaqa cusub ee ka imanaya Meross wuxuu bixiyaa ikhtiyaarka lagu nidaaminayo heerkulka midabka laga bilaabo 2700K illaa 6000K oo waxay noo ogolaaneysaa inaan ku hagaajino dhalaalka si aan u jecel nahay laga bilaabo 1% ilaa 100% dhalaalka ugu badan. Waxa weyneyntu oggoleyn waa midab beddelka.
In aan ka imid Mac horay ayaan u haysannay falanqeeyay qaar ka mid ah alaabooyinka shirkaddan munaasabadihii hore waxaanan xaqiijin karnaa inay leeyihiin qiimo aad u wanaagsan oo lacag ah, xaaladdan iyo inta aan qormadan ku qorayno shirkadda ma haysato iib nalka bogga rasmiga ah, laakiin waxay ka muuqataa websaydhka Amazon.com. Waxa caddaynaya ayaa ah in shirkaddani ay bixiso alaab qiimo aad u wanaagsan u leh lacag isla markaana ay la jaan qaadi karto HomeKit, waana taas sababta ay badiyaa u yihiin barta ugu wanaagsan ee otomaatiga ah ee gurigaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Meross wuxuu soo bandhigayaa laambadkeeda la jaan qaadi kara HomeKit
Sonos Raadio waxay kuu noqon kartaa saaxiib xagaaga